🚴‍♀️ စက်ဘီးစီးခြင်း | Hultsfred ကိုသွားပါ။
တိတ်ဆိတ်သောကျောက်စရစ်လမ်းများပေါ်တွင်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ယာဉ်ကြောအနည်းငယ်သာရှိသောလမ်းငယ်များပေါ်တွင်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်လာသည်။ ဤတွင်သင်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသဘောသဘာဝနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကီလိုမီတာ 17 မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမြန်နှုန်းနှင့် adrenaline ကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်သင်၏အစာအိမ်အတွက်ရောင်ရမ်းခံစားရချင်လျှင်, Dackestupet သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်! သို့မဟုတ်ပျော်ပွဲစားခြင်းတောင်းကိုထုပ်ပိုးပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးအားနက်ရှိုင်းသောသစ်တောများမှတစ်ဆင့်အဝတ်အစားများဖြင့်သယ်ဆောင်ပါ။
အိမ်ခေါင်မိုးက လမ်းသေးသေးလေးတွေမှာ လေတိုက်လို့ နင်းမိသွားတယ်။ အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးကို စက်ဘီးစီးရန် ရွေးချယ်ပါက ကီလိုမီတာ 17 ကို ကွဲပြားစွာ စောင့်မျှော်နိုင်ပါသည်။
ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ Flaten မှ Gårdveda သို့ စက်ဘီးစီးခြင်း။
Smalspåret Flaten - Gårdvedaတွင်စက်ဘီးစီးခြင်း - မိသားစုတစ်ခုလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောသာယာလှပသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခု။ Flaten ၏ဘူတာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ dressage စက်ဘီးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာနှင့်
Dackestupet - တောင်တက်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်း
Från toppen av Dackestupets slalombacke beskådar ni den fantastiska vyn över det småländska landskapet. I en resa nedför skidbacken tar du dig igenom byggda hinder såsom
အနီးနားတွင် စွန့်စားခန်းတစ်ခု စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ရထားလမ်းနဲ့ ပိုနီးချင်ရင်တော့ ရထားလမ်းအဆစ်တိုင်းကို သိပြီး သဘာဝကို တကယ်ခံစားဖို့ အခွင့်အရေးရှိပါတယ်၊
serseda သို့ Virserum လမ်းကြောင်းကျဉ်းတွင်စက်ဘီးစီးခြင်း
Virserum မှ Åseda သို့ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် စက်ဘီးစီးခြင်း။ Virserum ၏ ဘူတာရုံတစ်ဝိုက်တွင် လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ရှိပြီး အချိန်မီ ခရီးတစ်ခုကို ပြန်လည်ရောက်ရှိစေပါသည်။ လက်မှတ်ပြတင်းပေါက်မှာ ဝတ်ပြီး အရောက်ပို့ဖို့ ကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားပေမယ့်